Coronavirus covid-19 fanavaozana mihidy: rehefa mifoha ianao ka mahatsapa fa voafandrika, inona no azonao atao? : Martin Vrijland
Rehefa nanomboka ny taona 2020 dia tsapako fa ho taona sarotra izany. Ny fijerena ny andiany farany mankany amin'ny fanidiana koronavirus covid-19 ankehitriny dia manome fanantenana kely sisa fa tsy ho ela. Tamin'ny Taom-baovao, nanoratra aho hoe: "Raha ny hevitro dia 2020 no taonan'ny fanolanana ary fiovan'ny hypersonic. Fanovana tsy mbola hitantsika hatramin'izay. Efa mihamandeha ny fotoana ho an'ny mpitondra eto an-tany. Vao 25 ​​taona monja izy ireo no lasa mandra-pahatapitry ny diso. ”
Tao amin'ny boky nosoratako tamin'ny faran'ny taona 2019, dia efa nanambara mialoha aho fa mbola misy ny areti-mifindra ary mampiseho aho fa miatrika rafitra virus tanteraka. Tany am-piandohan'ny 24 Febroary dia nanoratra lahatsoratra aho ary nilaza fa efa ela ny fotoana. Izany dia herinandro talohan'ny nahatongavan'izany na dia toa nisy zavatra maika aza tany Holandy. Ny sary nalain'ny media tamin'ny (mety ho) IMB'ers ireo taratasy fidiovana mitaingina dia, raha ny hevitro dia fitaka fandaharana fampandrenesana haino aman-jery mba hampiala ny saina amin'ny zavatra tokony hividiananao: sakafo maharitra, sakafo am-bary, rano, sy ny sisa. Soa ihany fa teo ireo mpamaky dia be dia be ny fotoana talohan'ny hipoahan'ny tahotra.
Ny fanantenana hoe "ny cabal" dia hamafa
Betsaka ny faminaniana marina tamin'ny herinandro lasa ary hitako izay fepetra ho avy. Izany no antony mahatonga ahy matetika nanontany ahy hoe: "Inona no hataoko ankehitriny?", "Ahoana no fomba hiatrehana ny fepetra rehetra?"
Ao amin'ny media sosialy izao no ahitantsika horonantsary Janet Ossebaard mandehana manodidina. Nataony ho mpamonjy ny maha-olombelona an'i Donald Trump, ary ny mpijery dia nasaina hanaiky izay rehetra mitranga aminy. Miezaka handresy lahatra ny olona ny horonantsary, saingy hitanay mazava tsara ny andraikitra roa mifehy ny fanoherana voafehy eto. Janet Ossebaard dia manandrana mitondra olona any anaty harato fiarovana Q-Anon. Nilaza koa izy fa sahirana i Donald Trump 'ny cabalary manana anjara toerana amin'izany ny coronavirus.
Ny tsy tsapan'ny olona dia ny haino aman-jery maro hafa noforonina mba hilalao doble toy izany. Manantena anao hanavotra ireo vahiny izy na amin'ny fianjeran'ny cabal (miaraka amin'i Trump ho mpamonjy). Tsy maintsy manampy ny olona amin'ny nofy aho: Tsy ho lavo ny cabal.
Ireo mpijery horonantsary dia napetraka amin'ny fomba passive. Hoy aho amin'izy ireo:
Manosika azy ireo ianao amin'ny alàlan'ny fomba fiasa passive izay ataon'ireo olona mipetraka ao ambadiky ny fakantsary iray ary mahatsapa ho toy ny mandamina izany aminao izy. Fisalasalana izany fa ny Q-Anon dia klioba miafina an'ny olona manodidina an'i Trump maniry ny hanala ny harena amin'ny 1%. Tsy tonga hamonjy anao izy ireo! Miala tsiny. Mandiso fanantenana. Izany no fanantenana diso.
Trump dia ny cabal. Trump dia toy ny fampiharana mafy ny fepetra fanidy. Ilay sary voasoritra fa miaramila Defender an'arivony maro dia vonona hanadio ny 'cabal' any Eropa dia diso fanantenana diso.
Janet Ossebaard miantso anao mba hitoetra ao anaty rehefa manomboka manadio ny elita ireto miaramila ireto. Makà ny sary?
Janet Ossebaard koa dia nilaza fa hisy ny famatsiam-bola hiatrehana ny harena izay miaraka amina mpanankarena 1% miverina amin'ny vahoaka. "Ny mpamonjy lehibe no handamina izany ho anao koa." Tsia, tsy handeha izy. Izay hataony (sahala amin'ny mpitondra eropeana) dia hanome anao vola kely ary mety ho firenena maro be, banky ary vola fisotroan-dronono lehibe ho fananganana. Fantatrao ve ny antsoina hoe? kominisma.
Efa mizotra mankany amin'ny rafitra kômonista aho. Ao anaty lamasinina haingana. Nohazavaiko tamin'ny an-tsipiriany izany ity lahatsoratra ity.
Noho izany dia mijoro amin'ny fitodiana ara-bola tokoa isika, saingy karazana iray hafa ankoatry ny Q-Anon sy Janet Ossebaard no milaza aminao. Efa an-taonany maro no nilazanako teto amin'ilay tranonkala fa tokony ho avy ny famerenana toy izany (jereo eto). Ny virosy corona izao dia alibi tsara. Mety azo amboarina amin'ny fomba iray ny olona marobe, fa ny tantaran'i Janet Ossebaard dia feno fandrika vaovao tsy nahy (toa ny eto nanazava)
Ny rafitra kôminista izay nataon'i Janet Ossebaard sy ny maro hafa dia mankalaza be izao, raha miantso anao hipetraka mangingina ianao, dia tena mitondra fihoaram-pefy. Ho iray ihany io kaominista teknolojia feno manjaka.
Antenaina fa mety hisy mpanao politika vitsivitsy ihany no hivoaka amin'ny saha. Izany angamba no antony indrindra satria ilaina ny manolo ny pako izay nanangana ity dingana tsy refesi-mandidy ity tamin'ny tongotra vaovao miaraka amin'ny 'tanana tapaka'. Aza adala amin'ny hevitra sy fandrakofana ao amin'ny haino aman-jery hafa izay nametrahan'ireo Tale Jeneraly malaza malaza azy. Izany dia ampahany amin'ny lalao net Q-Anon fiarovana.
Ny rafitra komunista teknolojia dia mety midika fa hahazo ny fahatokisana fototra ianao (fidiram-bola, trano, sns), fa hanara-maso anao ny teknolojia.
Ny hetsika rehetra ataonao dia ho arahi-maso ireo rafitra vaventy lehibe. Ny fihanaky ny coronavirus dia manome antoka fa misy fomba teknolojia fanampiny azo ampiharina haingana. Tokony hieritreritra ny iray ianao ID nomerika tsy azo ihodivirana, ohatra, dia mirakitra an-tsoratra izay viriosy anananao; na sitrana ianao; izay fanafody sy vaksiny noraisinao ary mety ho arahi-maso ara-potoana ny fahasalamanao amin'ny fotoana tena izy. Ao anatin'ny internet amin'ny 5G ianao.
Rehefa mifoha ianao
Ka raha mifoha ianao ka mahita ny haino aman-jery hafa manandrana mihazona anao amin'ny fomba passive miaraka amin'ny antsasaky ny fahamarinana mifangaro amin'ny lainga ary manampy amin'ny fifampiraharahana amin'ny fanantenana diso, tsapanao ve fa tsy mitarika anao amin'ny teknolojia izy ireo? loza mampahazo aina. Maniry anao hipetraka ao anatiny ary avelao ny tafika sy ny polisy ihany no hanao ny asany. Rehefa dinihina tokoa, tonga izy ireo hanadio ny cabal. Tsia, ny ankamaroan'ny haino aman-jery dia mitatitra fiovan'ny paosy any The Hague na Brussels; farafaharatsiny dia tsy hampiseho aminao ny tena mahatsiravina. Ity lalao chess ity dia mandray an-tanana ny fanantenanao, ka manohy ny fanohizana ny fitantarana.
Ka raha tena te hifoha ianao dia mila mametaka lesoka toy ny tantaran'i Q-Anon sy Donald Trump. Raha tena te hifoha ianao dia tsy maintsy mijery izay zava-mitranga ary mahatsapa fa fitondrana fihoaram-pefy no mivoatra. Tsy misy intsony izao fitondrana tsy refesi-mandidy izao. Sanatria. Ny fahafahana nomena anao nankafy dia ho tafaverina ihany raha toa ka mahazo ny 'marika' ianao. Mampahatsiahy ny faminaniana ara-Baiboly iray ve izany? Eny, mampahatsiahy ny faminaniana iray amin'ny Baiboly izany:
Ary tsy misy afaka mividy na mivarotra afa-tsy izay manana ny marika, ny anaran'ilay bibidia, na ny isan'ny anarany ”(Apokalypsy 13: 16-17)
Ao amin'ny bokiko dia manazava aho fa ao anatin'ny fotoana faran'ny faminaniana. Na dia maro aza ny te-tsy hiraharaha ny fivavahana amin'izao andro izao, ary na dia tsy mpino aza aho dia fantatro fa manaraka ny fandaharam-pinoana ny mpitondra izao tontolo izao. Tsy antony tsy nanambaran’i Trump fa renivohitry ny Isiraely i Jerosalema, ary tsy andoavana an-dry zareo ny hanorina indray ny tempolin'i Solomona. Ao amin'ny bokiko dia manazava ny fomba anaran'ny mpitondra izao tontolo izao amin'ny 'script script'. Io script script io dia manambara mazava tsara sy haingana eo imasontsika.
ary fantatrao fa gadraina ianao
Ho hitantsika tsy ho ela dia hitantsika fa voahidy tanteraka isika. Mino aho fa ho lava io. Tsy tokony hatahotra loatra ny vahoaka ka handray fepetra draconian izy ireo. Maro no ho afaka hijery ny olona hoentina avy ao ambadiky ny varavarankeliny na avy any an-davarangana. Esorina satria mety efa tratry ny aretina izy ireo na satria tsy nihaino ny torolàlana. Ary satria samy ao an-tranony daholo ny olona, ​​tsy misy olona manampy.
Hanohy amintsika ny haino aman-jery fa miatrika fandidiana klinika sy ilaina ianao ary tsy hisy hahalala ny isan'ny olona hanjavona amin'ireo gulags. Misaotra an'i Janet Ossebaard niandry tamim-pahanginana ianao; matoky tena "fa manadio ny cabal i Trump".
Mety mbola hanao fihodivirana ihany isika amin'ny olona mandeha eny an-dalambe noho ny havizanana sy ny hanoanana ka noho izany tsy 'mihaino ny torolàlana'. Ny Defender 2020 dia mety efa vonona amin'izany (tsy hanadio ny "cabal").
Avy eo, aorian'ny volana na mety ho herintaona, ny fanantenana kely ho an'ny fanamaivanana dia ho toeran'ny politika.
Ny fanantenana fa ny haino aman-jery sy ny politika no ho tohanana amin'ny voalohany dia ny hoe misy otrikaretina miaro amin'ny tsimokaretina ary avy eo dia omena vaksiny. Ary azo atao ny manamarina fa hiaraka amin'ny fampidirana rafi-dizitaly (arak'izay voalaza etsy ambony), izay aharihary foana amin'ny olona rehetra izay misy azy ary izay fanafody azony, anisan'izany ny fanaraha-maso tena misy momba ny fahasalamana (ary ao anatin'izany ny CRISPR-CAS12 vakio sy soratana asa).
Avy eo dia afaka mandeha indray ianao. Hatramin'ny faritra mankany amin'ny faritra ary tsy misy intsony amin'ireo sisintany misokatra rehetra ireo, fa ny sisin'ny sisin'ny faritra dia ho betsaka sy nomerika avokoa. Izahay dia mahazo fahasamihafana eo amin'ny olona navela hiditra amin'ny faritra sasany sy ny hafa tsy mahazo miditra. Mandeha mankany amin'ny “fanjakana famonjena ara-teknolojika” isika.
inona no hataonao
Inona àry no hataontsika? Tokony hanohitra ny nify sy ny fantsika ve isika? Mino aho fa misy zon'olombelona fototra izay tsy tokony hanitsakitsahana azy ary izany no atao hoe fahafahana. Ankehitriny dia voahitsakitsaka io fotoana io ary tsy afaka manohitra fanjakan'ny polisy ianao. Raha ny marina, ny endrika fanoherana rehetra dia hosakanana amin-kitsimpo. Na dia hiteny amin'ny media sosialy na any amin'ny efitranonao (izay ihenoan'i Siri) dia heverinao fa fepetra rehetra tsy misy dikany izany, mety ho ao anatin'ny fanjakana feno ianao.
Na iza na iza singa manohintohina dia mety ary esorina. Izany rehetra izany dia hitranga eo ambanin'ny fitenenana hoe "fitambaran'ny coronavirus", satria ny olona tsy manaraka ny torolàlana na mety manome soso-kevitra amin'ny hafa aza tsy hanaraka ny torolàlana dia atahorana ho an'ny fiarahamonina.
Tena tsy misy torohevitra azo ampiharina ve aho amin'izay azonao atao? Eny, saingy izany dia ny fiovana fahatsiarovan-tena sy toe-tsaina hafa tanteraka noho ny fiheveran-tena pasifika izay anananan'ny media sy ny haino aman-jery hafa anao. Izany dia momba ny fampandehanana hoe iza marina ianao. Izany dia ny fampahavitrihana ny sehatry ny hery mamorona sy ny fiavianao. Toa mitsingevana izany, saingy tsy izany. Manazava azy aminao fotsiny aho, mampanantena aho.
Amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny sangan'asa master sy ny fanaovana faminaniana marina dia mazava fa dingana lehibe mankany amin'ny fanovana tena izy io. Matetika aho no nilaza fa ny lahatsoratra 1 dia fohy loatra ho an'ity. Izany no antony efa niasako naharitra ela teo amin'ny boky mazava sy azo antoka. Ka tokony hovakianao aloha ilay izy .. Tena zava-dehibe izany izao! Ary avy eo dia afaka mamaky ny fanampin'io boky io ianao, eto amin'ny tranokala.
Mahery mahery izahay ary fotoana tokony hialana amin'ny fomba passive. Lehibe lavitra noho ny tsapanao! Fotoana hahitana.
Araho ity lahatsoratra ity: vakio ato
Teraka tamin'ny lisitry ny rohy: valcabal.nl
Tags: Anon, cabal, Coronavirus, Covid-19, Donald, IMBers, Janet, lockdown, Ossebaard, areti-mifindra, Q, Trump, valan'aretina
Alie Muana nanoratra hoe:
24 Martsa 2020 ao amin'ny 12: 59
Fa maimaimpoana azonao, maimaimpoana no homenao…
Maninona raha mandefa malalaka ny vahaolana anananao?
Mahatsapa ho voatazona amin'ny fividianana ny bokinao aho mba hahitana ny vahaolana.
Tsy mieritreritra aho fa mifanaraka amin'ny fanambarana narosonao.
Sa tsy mety aho raha izany?
24 Martsa 2020 ao amin'ny 13: 18
Raha mandeha amin'ny fivarotam-boky ho an'ny Baiboly ianao, manao izany ve ianao maimaimpoana?
Raha mandeha amin'ny mofo ianao dia mahazo vola maimaimpoana?
Raha mijery tele ianao dia tsy manana famandrihana nandoa vola?
ary miteny ianao hoe "Fa tsy nisy noraisinao, satria tsy homena anao ..."
Tsy misy na inona na inona nataoko maimaim-poana nandritra ny 7 taona mahery, fa tsy afaka miangavy ny mpanao pirinty aho hanonta ny bokiko maimaimpoana.
Ny boky dia manome famintinana ireo rehetra 7 taona ireo ary ny zava-drehetra ao amin'ny boky dia maimaim-poana ary azo vakiana maimaimpoana hita eto amin'ilay tranokala. Avy eo tsy mila mikaroka ianao ary manindry avy amina lahatsoratra mankany amin'ny lahatsoratra. Na izany aza, ny boky dia manome famintinana tena sarotiny ary noho izany dia vita; amin'ny fangatahan'ny mpamaky maro.
Ny fankasitrahanao sy ny fankasitrahanao dia ankasitrahana. Mazava ho azy fa tsy ilaina. Navela.
Esmeevd nanoratra hoe:
24 Martsa 2020 ao amin'ny 22: 20
Vao nividy ny bokyo aho! Mamelà ahy hanome aingam-panahy mandritra ny taona maro. Ny hany zavatra izay mahatsiaro ho tsara sy mahatoky ny mombamomba anao dia anao!
Tsy ny olona fotsiny no henoko.
Ny fanontaniako dia mivaky manaraka.
Mandra-pahoviana izy ireo no afaka manidy anay? Misy dikany miaraka amin'ny ankizy sns izay tsy afaka maka fotoana tena haingana? Ankoatr'izany sy ny fahafantarana rehetra anananao! Tsy matahotra ve ianao fa hanangona anao izy ireo na hanadino anao na aiza na aiza misy azy (indraindray manontany tena hoe aiza) no midika fa azo vakiana amin'ny Internet daholo ny zava-drehetra. Ary afaka mivoaka hatreto raha ny hita hoe iza no nividy ilay boky? Izy ireo dia efa mihetsika mba hisintona anao. Ho vakiako tsara ny bokinao. Tiavo sy mahazoa.
Reny sahirana amin`izao fotoana izao, nefa ny fahafantarana fa mahery sy mahery lavitra noho izay iheverantsika isika! Fa ahoana no mbola misy ilay fanontaniana ..
24 Martsa 2020 ao amin'ny 14: 06
Ny valin-teninao amin'i Martin dia tsy madio. Avelao aho
24 Martsa 2020 ao amin'ny 14: 08
Matetika tsy namoaka anarana matetika izy ireo (fantatrao izao ny fomba fiasa ... trolls, profil moto, bots ... fa indrindra ny IMB'ers) izay mamaly rehefa maha-zava-dehibe ny mijanona ho miankina amin'ny hevitry ny fanjakana ny media sosialy.
24 Martsa 2020 ao amin'ny 13: 16
Io tokoa ilay fandaharan'asan'ireo ahiahiana efa mahazatra, tsy ekena ny tsy fanekena!
NY FIVORIANA HO AN'NY COMMUNITARIANIS
24 Martsa 2020 ao amin'ny 19: 01
Greta Thunberg mankafy milalao any ivelany miaraka amin'ny ankizy hafa
toa tsy notazonina tanteraka tany amin'ny elanelany metatra 😉
Sa izy natory tamin'ny Netherlands tamin'ny alina tamin'ny lohataona ary nangatsiaka -6 degsi celsius tamin'ny lohataona?
24 Martsa 2020 ao amin'ny 19: 45
Azo lazaina mialoha….
24 Martsa 2020 ao amin'ny 20: 17
Eny manomboka manomboka mankarary izany (raha tsy izany no tadiaviny).
24 Martsa 2020 ao amin'ny 20: 16
Nianarako fa ny lalindalina kokoa ao anaty lavaka bitro ary rehefa mitantana hahita loharano mety ianao (mieritreritra fa ity tranonkala ity no loharano tsara indrindra any Holandy) dia mihamora kokoa ny akofa (tranokala hafa voafehy) (fampahalalana mifandraika amin'ny ara-dalàna) ) mba hisaraka.
Mihatsara hatrany ny fahalalanao amin'ny fotoana rehetra. (Nihevitra ihany koa aho taona vitsy lasa izay fa ny Baudet sy ohatra ny fampandoazana nigel dia samy hafa be). Na izany na tsy izany dia mino aho ho an'ny 100% manontolo.
Ny 99% na mihoatra ny tranokala hafa no mifehy ny fanoherana
100% amin'ireo mpanao politika manerantany no fehezin'ny (miasa ho) ny sangany. (tsy misy tsy voamarina akory).
25 Martsa 2020 ao amin'ny 05: 25
Kite !!! Farany ny vola miditra (nohee, vakio ny lahatsoratra nosoratan'Andriamatoa Vrijland tamin'ny Novambra 2019)
Betsaka ny olona faly faly fa ny fanjakana no ho tonga amin'izy ireo amin'ny vola!
Vola izay iankinanay amin'ny fanjakana seza iray ihany.
Vola ilaintsika, izay ananan'izy ireo (matetika no miahiahy) manana be ary kely dia kely izahay, zezika izao ary tsy misy azontsika idirana.
Fa faly kosa isika amin'ny vola, efa nanokana lahatsoratra momba azy i Martin, taloha kokoa, ny alika dia mahazo vongana ary ho an'ny ambiny kosa ny ambiny, tsara, akia, lainga, Pak, tsara
Ny fonosana milamina, tsara
25 Martsa 2020 ao amin'ny 10: 23
Ka any Amerika izy ireo dia te hanao karazana fampidirana amin'ny fidiram-bola fototra (3000 usd isaky ny fianakaviana inoako). Ity no mety hitranga amin'ny fidiram-bola antsoina hoe vola maharitra vonjimaika (maharitra ny gazetye ho an'ny maharitra) any Etazonia.
Toa io vola karama io dia averina amin'ny fifanakalozana virtoaly (karazana FED bitcoin) farafaharatsiny efa naheno an'io aho. Koa avelao hahay zatra ny vola amin'ny World World elektronika vaovao ny mponina iray manontolo.
Ity dia mazava ho azy narafitra an'izao tontolo izao.
Toa izao ny olona any Etazonia sy Azia (fa naheno an'ity aho) dia mihodina ny 5G super haingana be (tsy misy fanelingelenana satria ny vahoaka izao dia manao zavatra hafa). Mino aho fa hitranga amin'ny tontolo hafa koa izany.
Any Afrika, izay firenena maro no mbola ao amin'ny 3G, tsy haiko ny fomba hanaovana an'izany.
Misy resaka teknolojia 6G aza, tsy fantatro hoe inona ilay horohoro hataony. Mivoatra haingana ny teknolojia vaovao ka miharihary ny zava-drehetra na dia tsy mbola nampahafantarina aza ny teo aloha.
25 Martsa 2020 ao amin'ny 10: 52
Elon Musk dia misy balafomanga roa manana endrika tsara tarehy izay voalaza fa hanangana satelita 5G am-polony ho an'ny fandrakofana maneran-tany.
Manontany tena aho hoe ahoana ny fomba ara-teknolojia, satria ny fangarahan'ny 5G dia mitaky elanelana kely, saingy izao no hitanao amin'ny fampahalalam-baovao.
26 Martsa 2020 ao amin'ny 06: 54
Tamin'ny 19 martsa 2020, ny COVID-19 dia tsy raisina ho toy ny areti-mifindra be loatra (HCID) any Angletera.
.. afa tsy ao Madurodam 🙂
26 Martsa 2020 ao amin'ny 07: 10
Izany dia satria i Trump, Bolsonaro ary Johnson samy maneho ny marika mitovy: ny marika eo ankavanana
Ary toy ny nanoratako im-betsaka tao amin'ny lahatsoratra maro, ny olona toa an'i Robert Jensen, Alex Jones ary ireo vava vorona mitovy elatra dia tokony ho harato fiarovana lehibe. Tsy maintsy mahazo mpanaraka maro izy ireo izay mitsikera ireo haino aman-jery mahazatra sy ny politika mahazatra. Tsy maintsy manampy amin'ny fananganana io marika io izy ireo ary mampifandray ireo filozofia sasany amin'io marika io. Tsy maintsy ataon'izy ireo mazava tsara io marika io amin'ny toby Trump (Trump, Bolsonaro, Johnson).
Avy eo, ny marika (mivoatra tsara) dia hotsofihina miaraka. Ny làlana izay nofidina ankehitriny dia ny làlan'ny "Mody izy ireo fa tsy ratsy izany amin'ny pandemonia coronavirus". Ny marika eo ankavanana dia mifamatotra amin'ny 'coronavirus krisis deniers'.
Avy eo natambatra tanteraka ilay raharaha. Avy eo i Trump sy Bolsonaro ary Johnson (faran'ny Brexit) dia tsy maintsy miala ao an-tanimbary ary raikitra indray ny takelaka politika ankavia mianadahy ary miditra am-ponja ireo mpitsikera; tsy tokony hisy hisalasala intsony ny haino aman-jery mahazatra.
Vokatry: ny kominista kaominista teknolojia iray "fanjakana famonjena" ao koa ny polisy mieritreritra.
29 Martsa 2020 ao amin'ny 13: 34
Misaotra anao Martin noho ny fomba fijerinao. Nividy ny bokinao ho PDF aho satria tsy haiko hoe ho avy ny totalin'ny fanakatonana, nefa tsy mbola toy izany koa, isika “manan-tsaina” no afaka mitàna "hidy manan-tsaina". Tsy maintsy milaza aho fa nidina indray aho satria heveriko fa tsy ara-drariny ny nanamarihanao ny karazan'olona rehetra ho mpanohitra voafehy, saingy hitako izao fa marina noho ny nieritreretako tamin'izany fotoana izany ianao. Hatramin'ny Charlie H aho dia nitodika tany amin'ny bitro rehetra - teny izay aleoko tsy mampiasa intsony satria fantatro izao fa fanoharana ny fiasan'ny pedophile izany - ary tokoa aza ny fiafarany maro no namboarina tamin'ny tanjona. Manontany tena aho amin'ny hoe mora ny vahoaka iray manontolo eran'izao tontolo izao toa ny andiam-bolon'ondry no tarihin'ny tahotra amin'ny fanakatonana sy ny fihenan'ny fiaraha-monina. Satria ny fiteny dia endrika faneva, ireo fehezan-teny roa ireo dia manana ambony kokoa noho izay mety ho noeritreretinao tamin'ny voalohany. Ny teny filamatra miaraka amin'ny halaviran'ny vatana fa akaiky ny zavatra iray dia mety hisy fiatraikany hafa tanteraka. Ary ny fanakatonana, mazava ho azy, dia manondro ny hidy ny fanahintsika na ny sela maty totipotent rehefa miantso azy ianao.
Bill Wesick of occultcience101, tsy ao amin'ny YT intsony fa milalao, ary ankehitriny amin'nyocs101ark.com dia sahy manapa-kevitra momba ny fitenin-doko ao amin'ny Saturnal Luciferian izay voan'ny otrikaretina vokarin'ny tena virus. Tsy ho hitanao izany mandra-pahafatanao azy. Mampalahelo fa tsy mahita izany ny 99% aminay.
Marary vavony aho raha mieritreritra momba izay miandry ny olombelona, ​​fa miezaha mafy hanohy ny fifandraisana amin'ny loharano loharano tany am-boalohany. Tsy manana zavatra hafa intsony aho ...
« Aza hadino fa ny horonantsary Covid-19 Janet Ossebaard (Ninefornews) dia fandrika vaovao sandoka
Ny Trump, Q-Anon ary 'manadio ny angano lalina indrindra' (Robert Jensen, Janet Ossebaard) »
Fa maninona no olona maro manodidina anao no jamba?
Ny virus dia manandrana mitsindrona ny vatana manontolo ary mangalatra fampahalalana momba ny sela
Lydia Roosje op Kaonferansa ho an'ny mpanao gazety Mark Rutte sy Hugo de Jonge: ilay fiarahamonina iray sy sasany metatra sy ny fampidirana ireo fampiharana
Fakafakao op Fa maninona no olona maro manodidina anao no jamba?
ZalmInBlik op Fa maninona no olona maro manodidina anao no jamba?
Martin Vrijland op Kaonferansa ho an'ny mpanao gazety Mark Rutte sy Hugo de Jonge: ilay fiarahamonina iray sy sasany metatra sy ny fampidirana ireo fampiharana
Martin Vrijland op Fa maninona no olona maro manodidina anao no jamba?